Isuzu Factory, mpamatsy - mpanamboatra China Isuzu
Crankshaft fiara matanjaka sy mateza ho an'ny Isuzu4JJ1
Modely azo ampiharina: Isuzu4JJ1
Ho an'ny milina marokoroko crankshaft, lathes CNC, milina fanodinana anaty CNC, lathes CNC, ary fitaovana hafa mandroso dia hampiasaina betsaka amin'ny famadihana CNC, ny fikosoham-bary ao anaty ary ny fanodinana ny diary lehibe sy ny fampifandraisana ny diary momba ny tsorakazo mba hampihenana tsara ny fiovan'ny crankshaft machining. Ho an'ny famaranana ny crankshaft dia ampiasaina betsaka amin'ny famitana ny diary ny grinders crankshaft voafehin'ny CNC. Ity karazana milina fikosoham-bary ity dia hohajaina miaraka amin'ny fepetra takiana ho an'ny fikolokoloana kodiarana fitaovana fanamafisam-peo, fitaovana afovoany fanaraha-maso mandeha ho azy, fandrefesana mandeha ho azy, fitaovana fanonerana mandeha ho azy, fitafiana kodia mandeha ho azy, haingam-pandeha tsy miova ary fepetra hafa ilaina hiantohana ny fiorenan'ny fikolokoloana kalitao. Ny toetran'ny fiankinan-dohan'ny fitaovana avo lenta ankehitriny dia tsy antenaina hiova ao anatin'ny fotoana fohy.
Ny orinasa dia manana fitaovana fanodinana kalitao avo lenta, fomba fitsapana siantifika ary mpiasa manana kalitao avo lenta. Vokatra lehibe: faritra matevina nohitsakitsahana avo lenta; faritra fiara; faritra mekanika sy faritra mekanika mandeha ho azy. Masinina lehibe: lathe fifehezana nomerika CNC, lathe fanaraha-maso isa lehibe, ivon-toeran'ny milina CNC, fitotoana varingarina anatiny sy ivelany, fitotoan'ny crankshaft, fitotoana tsy misy afovoany, famolavolana, fitotoan'ny fitaratra ... sns. Ny mpiara-miasa matoky anao ve!
Crankshaft fiara mafy orina ho an'ny Isuzu4BD1
Ny orinasanay dia mpanamboatra manokana amin'ny famokarana, ny varotra ary ny famolavolana ny kojakoja ilaina amin'ny laoniny. Ireo vokatra dia manamboatra famolavolana bobongolo, famokarana fiara, famokarana milina, automatique ary indostria hafa, ary manolo-tena hanome ny mpanjifa teknolojia matihanina, serivisy avo lenta ary asa tso-po. Manana ny lazany tsara ny vokatra avy amin'ilay orinasa, ary nanarona haingana ny firenena sy an'izao tontolo izao ny tamba-jotra. Izy io dia manana toerana eo amin'ny tsenan'ny lasitra sy ny mari-pahaizana momba ny fitaovana, ary nahazo fiderana avy amin'ny mpanjifa.